नर्थक्यारोलिना ट्रायाडबासी दिदीबहिनीहरूलाई खुशीको खवर !!! 😁 - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 04:22
नर्थक्यारोलिना ट्रायाडबासी दिदीबहिनीहरूलाई खुशीको खवर !!! 😁
इनेप्लिज २०७८ भदौ २५ गते २२:०२ मा प्रकाशित
हामी हिन्दू नारीहरूले ऋतुदोष मुक्तिका लागि वार्षिक रुपमा गरिने ऋषिपञ्चमी पूजा आगामी शनिबार सेप्टेम्बर 11 का दिन परेको कुरा सवैमा बिदितै छ । उक्त ऋषी पञ्चमीका दिन हाम्रा परम आदरणीय गुरु वाचन शिरोमणि दिनबन्धु पोख्रेलज्युको मुखारविन्दबाट सप्तऋषि पूजाको कार्य गराइनुहुने हुँदा यहाँ वर परका दिदि बैनी हरुलाई आफ्नो परम्परा अनुसारको पूजामा जुट्ने अवसरबाट वञ्चित नहुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौं।यो हाम्रो अहो भाग्यको कुरा पनि भएकोले जानकारी पाउनु हुने दिदीबैनीहरु यो पवित्र कार्यमा सरीक हुनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ।
समय : सेप्टेम्बर ११ शनिबार, बिहान ११ बजे।
स्थान : TNCC, 3519 Imperial Dr.High Point 27265
नोट :१) पूजाको सामग्री र बस्ने आसन स्वयंले व्यवस्था गर्नु पर्ने छ।
२) माक्स अनिवार्य गराइएको छ।
३) पूजा व्यवस्थापन का लागि सवै भक्तालुज्युहरुबाट $10 सङ्कलन गरिने भएको छ।
पूजा समापन पछि प्रसाद कर्कलो भोजनको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
आयोजक : 2078 ऋषि पञ्चमी पूजा समिति
राधा पाैडेल 917 325 6396
इन्दिरा अर्याल 336 814 7334
सुष्मा ढकाल 336 624 2627
सान्त्वना खडका 336 471 7675